Muuri News Network » Daawo:Guddiga Isku-dhafka ciidanka xoogga dalka oo gaaray Baydhabo
Daawo:Guddiga Isku-dhafka ciidanka xoogga dalka oo gaaray Baydhabo
Oct 11, 2015 - Comments off
Wafdi ka socda wasaaradda gaashaandhigga Somalia oo uu hoggaaminayo wasiiru-dawlaha wasaaradda Maxamed Cali Xagaa iyo xubno kale oo ka socda dowlada federaalka Somalia ayaa maanta booqasho ku tagay degmada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay.
Wasiir-u-dawladaha wasaaradda gaashaandhigga, Maxamed Cali Xagaa ayaa ka hadlay ujeeddada safarkooda maanta ayaa xusay inuu yahay sidii ay wada-tashi ugala yeelan lahaayeen maamulka Koonfur-galbeed ee Somalia dhismaha ciidan Qaran oo isku dhafan, matalana dhammaan Somalia oo dhan.
“Ujeedkeenna ugu weyn ee maanta aan Baydhabo u nimid waa sidii loo heli lahaa dhismaha ciidan Qaran oo leh karti iyo hufnaan, socdaalkan waxaa igu weheliya xubno ka tirsan guddiga isku-dhafka ciidamada iyo madax kale oo deegaankan kasoo jeeda. Waxaan wadatashi la yeelan doonaa dhinacyada ay arrintani khuseyso oo ugu horreeyo hoggaanka maamulka Koonfur-galbeed,” ayuu yiri Xagaa.
Sidoo kale, Jen. Maxamed Xaashi oo ka mid ah xubnaha guddiga Isku-dhafka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa dhankiisa tilmaamay iyadoo la raacayo hannaan ay dadku u dhan yihiin in la soo xuli doono ciidan leh karti sare, isagoo xusay inay dhawaan ku guuleysteen in laga hirgeliyo deegaannada Jubbooyinka, gaar ahaan magaalada Kismaayo ciidammo Qaran oo isku-dhafan.
Ugu dambeyn, dhawaanahan ayay wasaaradda difaaca Somalia waxay dadaal ugu jirtay sidii dalku u yeelan lahaa ciidammo Qaran oo leh awood ay ku amniga guud ee dalka ku hantaan. Si looga maarmo ciidamada dalka jooga ee ka socda dalalka Afrika qaarkood.